KingCom YOLO Headphone | Buy online | SHOP.COM.MM
KingCom YOLO Headphone
Black & Blue Blue & Fushcia Orange & Green Red & Grey
Soft and Wide Headband Design
Canvas Bag is for free
ိုLIKE LIKE LIKE
အလန်းဇယားနားကြပ်လေးပါ ဖက်ရှင်လည်းဆန်တယ် အသံလည်းမိုက်တယ် တော်တော်ကောင်းလို့လက်ရှိနားထောင်နေတာ Read more Hide
ဒီလိုအရည်အသွေးကို ဒီလိုဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ အရမ်းတန်တာပေ့ါ
သီချင်းသံကလန်ထွက်သွားတာပဲ လုံးဝအမိုက်စားနော် အာမခံလည်းပါသေးတယ် Read more Hide
ဈေးသက်သာ အဆင့်မြင့် အသံထွက်သိပ်ကောင်း ဖက်ရှင်ကျကျတပ်ပြီး နားထောင်လို့ရ ဝယ်ထားတာတန်တယ် Read more Hide
အသံကတော့တကယ့်ကိုအလန်းစားလေးပါ နားထဲမှာငြိမ့်နေတာပဲ ဝယ်ရတာလဲတန်တယ် အာမခံချက်လည်းကောင်းတယ် Read more Hide
ဆူဆူညံညံနားကြပ်တွေ သီချင်းသံမပီမသကြားရတဲ့ နားကြပ်တွေထဲမှာတော့
YOLO မပါဘူးလို့ ရဲရဲကြီးအာမခံတယ်။ စတိုင်ကိုက အလန်းလေ Read more Hide
သီချင်းနားထောင်ရတာကြိုက်ရင် ဒီလိုနားကြပ်မျိုးအမြန်ဝယ်ထာားဖို့ အကြံပြုချင်တယ်နော်...... Read more Hide
အသံကောင်းချက်က 9+ ရှိတယ် ငြိမ်နေတာပဲ
ဈေးကလည်းမများတော့ အဆင်ပြေပါတယ် Read more Hide
ချစ်စရာကောင်းသလို ဖက်ရှင်ကျတဲ့နားကြပ်လေး yolo အသံထွက်လည်းပြောစရာမလို Read more Hide
KingCom's YOLO Headphone will offer you the best experience of music. Soft and wide headband design will make you stand out in the crowd. This product is available now at shop.com.mm online shopping mall.
Specifications of YOLO Headphone